ऊर्जा - त्यहाँ हाम्रो ग्रह मा मात्र जीवन छैन, तर पनि ब्रह्माण्डकै भनेर यो छ। एकै समयमा यो धेरै फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, गर्मी, ध्वनि, प्रकाश, बिजुली, माइक्रोवेव लागि, क्यालोरी ऊर्जा को विभिन्न प्रकारका छन्। सबै प्रक्रियाहरू हामीलाई वरिपरि ठाउँ लिनका लागि, यो पदार्थ आवश्यक छ। पृथ्वीमा सबै कुराहरू ऊर्जा अधिकांश सूर्य देखि प्राप्त, तर त्यहाँ अन्य स्रोतहरू छन्। सूर्य जस्तै समय 100 मिलियन भन्दा शक्तिशाली शक्ति मा विकसित हुनेछ धेरै रूपमा यसको ग्रह पठाउँछ।
ऊर्जा के हो?
यो सिद्धान्त, Albertom Eynshteynom अगाडि राख्न हामी कुरा र ऊर्जा को सम्बन्ध अध्ययन। यो ठूलो वैज्ञानिक अर्को एक पदार्थ परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाउन सक्षम थियो। यो ऊर्जा शरीर को अस्तित्व मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कारक छ कि बाहिर गरिएका र कुरा माध्यमिक छ।
ऊर्जा - छ, द्वारा र ठूलो, क्षमता केही काम। यो शरीर सार्दा वा नयाँ गुण दिन सक्षम एक शक्ति को अवधारणा पछि खडा गर्ने त्यो थियो। के शब्द "ऊर्जा" गर्छ? भौतिक - यो फरक eras र देशहरू आफ्नो जीवन, धेरै वैज्ञानिकहरूले समर्पित गर्ने आधारभूत विज्ञान, छ। अरस्तू मानव गतिविधिहरु संकेत गर्न शब्द "ऊर्जा" प्रयोग। यो "गतिविधि", "शक्ति", "कार्य", "शक्ति" - ग्रीक "ऊर्जा" बाट अनुवादित। पहिलो पटक शब्द "भौतिकशास्त्र" भनिन्छ ग्रीक विद्वान को treatise देखा पर्छ।
पारंपरिक अर्थमा, यो शब्द अंग्रेजी भौतिक गढा गरिएको छ अब थोमस युवा। यो महत्त्वपूर्ण घटना टाढा 1807 मा भयो। XIX सताब्दी को 50-एँ मा। अंग्रेजी इन्जिनियर Uilyam Tomson पहिलो शब्द "गतिज engergiya" प्रयोग र 1853 मा स्कटिश भौतिक Uilyam Renkin शब्द "ऊर्जा क्षमता" गढा।
आज, यो एक scalar मात्रा भौतिक सबै क्षेत्रमा उपस्थित छ। यो आन्दोलन र कुरा को अन्तरक्रिया विभिन्न प्रकारका एक साधारण उपाय छ। अर्को शब्दमा, यसलाई अर्को एक फारम को रूपान्तरण एक उपाय हो।
Units र प्रतीक
ऊर्जा मात्रा joules (जे) मा मापन गरिएको छ। ऊर्जा प्रकार आधारमा यो विशेष एकाइ, जस्तै विभिन्न पदनाम, हुन सक्छ:
डब्ल्यू - प्रणाली को कुल ऊर्जा।
Q - गर्मी।
यू - संभावित।
प्रकृति मा, त्यहाँ ऊर्जा विभिन्न प्रकारका छन्। मुख्य हुन्छन्:
प्रकाश, ध्वनि, चुम्बकीय: त्यहाँ ऊर्जा अन्य प्रकारका छन्। हालैका वर्षहरूमा physicists को थुप्रैले वैज्ञानिकहरूले तथाकथित "गाढा" ऊर्जा अस्तित्व को परिकल्पना गर्न इच्छुक छन्। यो पदार्थ को माथि प्रकार प्रत्येक यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। उदाहरणका लागि, ध्वनि ऊर्जा छालहरू को माध्यम द्वारा प्रसारित गर्न सक्षम छ। तिनीहरूले जो मार्फत तपाईं ध्वनि सुन्न सक्नुहुन्छ मानिसहरूलाई र जनावर, को कान मा कम्पन eardrum को घटना योगदान। विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया को पाठ्यक्रम सबै जीव को जीवन को लागि आवश्यक ऊर्जा जारी। कुनै पनि इन्धन, खाद्य उत्पादन, ब्याट्री, ब्याट्री यो ऊर्जा भण्डारण छन्।
हाम्रो ज्योति विद्युत छालहरू को रूप मा विश्व ऊर्जा दिन्छ। मात्र तरिका त्यो ब्रह्माण्ड को vastness हटाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो सौर प्यानल रूपमा आधुनिक प्रविधि, धन्यवाद, हामी सबैभन्दा प्रभावकारी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अतिरिक्त प्रयोग नगरिएको ऊर्जा विशेष energohranilischah भण्डारण गरिएको छ। ऊर्जा माथिको प्रकारका साथ अक्सर थर्मल Springs, नदी, प्रयोग गरिन्छ ज्वार सागर को, Biofuels।
ऊर्जा यस प्रकारको "संयन्त्र" भनिन्छ भौतिक शाखा मा अध्ययन गरिएको छ। यो पत्र ई यसको मापन joules मा बाहिर छ (जे) द्वारा denoted छ। यो ऊर्जा के हो? भौतिक अध्ययन शरीर को मेकानिक्स गति र प्रत्येक अन्य संग वा बाह्य क्षेत्रहरू आफ्नो अन्तरक्रिया। कारण गर्न गतिज (Ek denoted), र ऊर्जा भनिन्छ शरीर को गति कारण ऊर्जा, शरीर को अन्तरक्रिया वा बाह्य क्षेत्रहरू, सम्भावित (ई) भनिन्छ। आन्दोलन र अन्तरक्रिया मात्रा प्रणाली को कुल यांत्रिक ऊर्जा छ।
दुवै प्रजाति को गणना लागि त्यहाँ एक सामान्य नियम छ। ऊर्जा आवश्यक वर्तमान राज्य गर्न शून्य अवस्थाबाट शरीर को अनुवाद लागि आवश्यक काम गणना गर्न को मात्रा निर्धारण गर्न। यो काम ठूलो, अधिक ऊर्जा यस अवस्थामा एक शरीर हुनेछ।
विभिन्न संकेतहरू को Unbundling
त्यहाँ ऊर्जा विभाजन धेरै प्रकार छन्। विभिन्न आधार मा विभाजित छ: बाह्य (गतिज र सम्भावित) र आन्तरिक (यांत्रिक, थर्मल, विद्युत चुम्बकीय, आणविक, गुरुत्वाकर्षण)। कमजोर ऊर्जा र बलियो अन्तरक्रियामा - विद्युत ऊर्जा बारी मा चुम्बकीय र बिजुली र आणविक विभाजन गरिएको छ।
कुनै पनि सार्दा शरीर गतिज ऊर्जा उपस्थिति द्वारा प्रतिष्ठित। यो अक्सर भनिन्छ - ड्राइभिङ। उत्प्रेरित गर्छ कि शरीर को ऊर्जा, धीमा गर्दा हराएको छ। तसर्थ, गति छिटो, अधिक गतिज ऊर्जा।
प्रसारित बहिनीहरु को गतिज ऊर्जा अन्तिम भाग एक स्थिर वस्तु गर्न सार्दा शरीर को सम्पर्क मा, र गति मा जान्छ। गतिज ऊर्जा सूत्र निम्नानुसार छ:
ई = MV 2: 2,
जहाँ m - शरीर को ठूलो, V - शरीर को आन्दोलन को गति।
वस्तु को गतिज ऊर्जा यसको ठूलो को आधा उत्पादन र यसको वेग को वर्ग बराबर छ: यो सूत्र को शब्दमा निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा यस प्रकारको जो शक्ति को कुनै पनि क्षेत्र छन् एक शरीर, छ। यसरी, वस्तु एक चुम्बकीय क्षेत्र को प्रभाव अन्तर्गत छ जब चुम्बकीय उत्पन्न हुन्छ। सबै शरीर, जमीन मा हो सम्भावित गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा छ।
वस्तुहरु को गुण को अध्ययन आधारमा तिनीहरूले ऊर्जा क्षमता को विभिन्न प्रकार हुन सक्छ। यसरी, खंड सक्षम छन् जो लचीला र लोचदार शरीर लोचदार ऊर्जा क्षमता वा तनाव छ। कुनै पनि झर्ने शरीर, पहिले तय गरिएको छ जो, क्षमता हराउछ र गतिज ऊर्जा प्राप्त। यी दुई प्रजाति को मूल्य बराबर हुनेछ। निम्नानुसार हाम्रो ग्रह गरेको गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्षमता सूत्र को क्षेत्र मा हुनेछ:
ई N = MHG,
जहाँ m - शरीरको वजन; घन्टा - शून्य स्तर माथि शरीर ठूलो केन्द्र को उचाइ; G - गुरुत्वाकर्षण को प्रवेग।
पृथ्वी संग पारस्परिक एउटा वस्तु को ऊर्जा क्षमता, यसको ठूलो को उत्पादन, प्रवेग कारण गुरुत्वाकर्षण र यसलाई स्थित छ जो मा उचाइ छ: यो सूत्र को शब्दमा निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ।
यो scalar मात्रा एक विशेषता ऊर्जा आरक्षित सामाग्री बिन्दु (शरीर), शक्ति को सम्भावित क्षेत्र मा स्थित र शक्ति क्षेत्र को काम मार्फत गतिज ऊर्जा प्राप्त गर्न विस्तार हो। कहिलेकाहीं langranzhiane सिस्टम मा अवधि (Lagrange गतिशील प्रणाली समारोह) छ जो निर्देशांक एक समारोह, रूपमा उल्लेख। यो प्रणाली आफ्नो अन्तरक्रिया वर्णन गर्दछ।
सम्भावित ऊर्जा स्पेस मा disposed शरीर केही विन्यास लागि शून्य समीकृत छ। विन्यास थप गणना को सुविधा निर्धारण र भनिन्छ "सम्भावित ऊर्जा normalization।"
ऊर्जा संरक्षण को व्यवस्था
भौतिक सबैभन्दा आधारभूत tenets को एक ऊर्जा संरक्षण को व्यवस्था छ। उहाँलाई अनुसार, ऊर्जा कतै बाहिर खडा गर्दैन र गायब छैन। यसलाई निरन्तर अर्को एक फारम देखि उत्प्रेरित गर्छ। अर्को शब्दमा, केवल ऊर्जा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि, एक टर्च ब्याट्री को रासायनिक ऊर्जा बिजुली ऊर्जा मा परिवर्तित छ, र यो देखि - प्रकाश र गर्मी मा। विभिन्न विद्युत उपकरण प्रकाश, गर्मी वा ध्वनि रूपान्तरित छन्। प्रायजसो, परिवर्तन को अन्त परिणाम गर्मी र प्रकाश छन्। कि पछि, ऊर्जा वरपरको ठाउँ जान्छ।
ऊर्जा ऐन धेरै बताउन सक्नुहुन्छ शारीरिक घटना। वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको यसको स्थिर को कुल मात्रा स्थिर रहन्छ भन्छन्। कसैले सिर्जना गर्न वा फेरि ऊर्जा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रकार को एक उत्पादन, मान्छे झर्ने पानी इन्धन ऊर्जा, अणु प्रयोग गर्नुहोस्। यसरी आफ्नो तरिका को एक अर्को मा परिवर्तित छ।
संभोग ऊर्जा मान - 1918 मा वैज्ञानिकहरूले ऊर्जा संरक्षण को व्यवस्था समय translational सन्तुलन को एक गणितीय परिणाम हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्षम थिए। अर्को शब्दमा, ऊर्जा किनभने भौतिक को व्यवस्था विभिन्न समयमा फरक छैन conserved छ।
ऊर्जा - काम गर्न शरीर क्षमता छ। बन्द शारीरिक प्रणाली मा यो समय भर कायम छ (प्रणाली बन्द छ सम्म) र तीन थपिएको integrals ड्राइभिङ गर्दा गति मूल्य संरक्षण एउटा प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी समावेश: ऊर्जा, गति, गति। शारीरिक प्रणाली समय मा homogeneous हुँदा "ऊर्जा" को अवधारणा को परिचय उपयोगी छ।
शरीर को आन्तरिक ऊर्जा
यो आणविक अन्तरक्रियामा र यो constituting अणु को गति थर्मल को शक्ती को योगफल प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो प्रणाली राज्य एक अद्वितीय समारोह छ किनभने यो सिधै, मापन गर्न सकिन्छ। जब प्रणाली यो अवस्थामा छ, यसको आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली को इतिहास बिना निहित मूल्य छ। एक शारीरिक अवस्थाबाट अर्को गर्न संक्रमण मा आन्तरिक ऊर्जा मा परिवर्तन सधैं आफ्नो अन्तिम र प्रारम्भिक अमेरिका मा बिचको फरक बराबर छ।
ग्याँस को आन्तरिक ऊर्जा
ठोस साथै ग्याँसहरु र ऊर्जा हो। यो गर्मी (अनियमित) जो अणुहरु, अणु इलेक्ट्रन, नाभिक समावेश प्रणाली मा कणहरु, को गति को गतिज ऊर्जा छ। एक आदर्श ग्याँस (ग्याँस गणितीय मोडेल) को आन्तरिक ऊर्जा यसको कण को गतिज ऊर्जा योगफल हो। यो खातामा ठाउँ मा अणु को स्थिति निर्धारण जो स्वतन्त्र चर, संख्या छ जो स्वतन्त्रताको डिग्री संख्या लिन्छ।
हरेक वर्ष, मानवता थप र थप ऊर्जा खपत भएको छ। प्रायजसो, प्रकाश र हाम्रो घर, गाडी र विभिन्न तंत्र को सञ्चालन, यस्तो कोइला, तेल र ग्याँस रूपमा प्रयोग जीवाश्म hydrocarbons लागि ताप आवश्यक ऊर्जा प्राप्त गर्न। तिनीहरू गैर-अक्षय स्रोतहरू।
दुर्भाग्यवश, पानी, हावा र सूर्य रूपमा अक्षय स्रोतहरू प्रयोग गरेर ग्रह मा उत्पादित ऊर्जा को केवल एक सानो भाग। मिति, शक्ति आफ्नो शेयर मात्र 5% छ। मान्छे को अर्को 3% आणविक शक्ति बिरुवाहरु उत्पादन आणविक ऊर्जा को रूप मा प्राप्त।
गैर-अक्षय स्रोतहरू (joules मा) निम्न स्टक छ
आणविक ऊर्जा -2x 10 24;
ग्याँस र तेल को ऊर्जा -2× 10 23;
5 एक्स 20 अक्टोबर - आंतरिक ग्रह गर्मी।
पृथ्वीको अक्षय स्रोतहरू वार्षिक मूल्य:
सौर ऊर्जा -2x 24 अक्टोबर;
हावा -6x 10 21;
नदी - 6.5 × 10 19;
ज्वार - 2.5 x 23 अक्टोबर।
मात्र पृथ्वीको अक्षय मानवता को गैर-अक्षय ऊर्जा रिजर्व देखि समसामयिक संक्रमण हाम्रो ग्रहमा एक लामो र सुखी जीवनको लागि एक मौका छ। संसारभरिका वैज्ञानिकहरूको उन्नत विकास लागू गर्न ध्यान ऊर्जा को विभिन्न गुणहरू अध्ययन जारी।
OBZH: ट्रान्सक्रिप्ट। पाठ OBZH
पाठ के हो? विस्तृत विश्लेषण
Umlauts र आफ्नो विशिष्टता - साथ अंक माथि जर्मन पत्र
चार्ज नगरी ट्याब्लेट कसरी चार्ज गर्ने? तपाइँको ट्याब्लेट USB मार्फत कसरी चार्ज गर्ने?
घर मा जहाजहरु सफाई। परम्परागत व्यञ्जनहरु
अवधारणा र वित्तीय पिरामिड को संकेत। वित्तीय पिरामिड लागि आपराधिक दायित्व
Minecraft मा छाती Privat कसरी विवरण
एयर कंडीशनर freon भर्नु: विशेषताहरु
कुन इस्तांबुल सेन्टर राम्रो हुन जान्छ
बश गूंथाना 6104 (टोष्टर) निर्देशन, विनिर्देशों, समीक्षा
डबल बाल रंग: फोटो
एक pacifist गर्ने हो? यो एक peacemaker संसारभरि शान्ति आन्दोलन को एक सदस्य हो